Salina, KS • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mandrosoa rehefa avy eo miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra ho an'ny fikosoham-batana erotika na fanorana Nuru Salina, fomban'ny KS!
Salina dia tanàna ao amin'ny distrikan'i Saline County, Kansas, Etazonia. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 47,707 ny isan'ny tanàna. Any amin'ny iray amin'ireo faritra mpamokatra varimbazaha lehibe indrindra eto an-tany i Salina dia ivom-pivarotana isam-paritra ho an'ny avaratry afovoan'i Kansas. Mandrosoa rehefa avy eo miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra manosotra vatana erotika or Nuru massage Salina, KS fomba!
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Aprily-Septambra